Olona efa migadra izany. Tsarao aloha, hoy ny tenany. Raha tsy diso izy dia afaka miditra ho depiote. Tamin’ny taona 1972 dia misy ny atao hoe “enquête de moralité”. Misy ary namanay tratra tany amin’ny Bar dia tsy mahazo nanala fanadianana mpitsara. Ny taona 1974 vao nivoaka. Misalasala amin’izao fotoana izao, hoy hatrany ny tenany, ny vahoaka mpanaradia ireo kandida manana raharaham-pitsarana ireo hoe tena nanao heloka tokoa ve sa tsia ny kandida tohanan’izy ireo. Raha ny tokony ho izy dia notsaraina aloha ireny kandida ireny saingy efa tara loatra moa izao ka ny mety dia tokony haato amin’ny maha kandida azy, hoy ity mpahay lalàna iraisampirenena ity, ireo kandida manana raharaham-pitsarana ireo fa mampivoraka saim-bahoaka.